27 / 01 / 2020 28 / 01 / 2020 ဂရေဟမ် 2010 Views စာ0မှတ်ချက် ခရစ်တံဆိပ်ခေါင်း, Lego, LEGO ဝါသနာရှင်မီဒီယာနေ့ရက်များ 2019, Lego Speed Champions, RLFMDays 2019, Speed Champions
ဒီဇိုင်းခေါင်းဆောင်ခရစ်တံဆိပ်ခေါင်းသည် start၏ဒုတိယအခနျး ing Lego Speed Champions နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အနာဂတ်ကိုင်ထားလိမ့်မည်
အသစ် Lego Speed Champions 2020 အတွက်အစုံသည်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့၏ပန်ကာမှတုန့်ပြန်မှုကိုကျော်ဖြတ်ပြီးရလဒ်ကိုပြောင်းလဲခြင်းအားအဓိကကျသောနည်းလမ်းဖြင့်မည်သို့အကောင်အထည်ဖော်မည်ကိုရှာဖွေခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ လုပ်စရာတွေပိုများလာတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ခရီးကမပြီးသေးဘူး။
ဒီဇိုင်းခေါင်းဆောင်ခရစ်တံဆိပ်ခေါင်းသည်ယခုနှစ်အဓိကအကြောင်းအရာသို့တိုးတက်မှုများကိုညွှန်ကြားရန်တာဝန်ရှိသည်။ In စတုတ်ထစart နှင့်အတူတစ် ဦး In-depth စကားပြောဆိုမှု၏ Brick Fanaticsသူကရှစ်ကျယ်ပြန့်စကေးထက်ကျော်လွန်ခဲ့ကြသောအခြားတိုးတက်မှုများကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး p ၌တည်၏art ဒီမော်ကွန်းအင်တာဗျူး၏, သူ၏အနာဂတ်ဆွေးနွေးထားပါတယ် Lego Speed Champions.
ဒါဟာစတင်မှာဒုတိယသွားလာရင်းရကျေနပ်စရာဖြစ်ခဲ့သည် Speed Champions?
ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုဒုတိယအကြိမ်အဖြစ်အမှန်တကယ်မကြည့်ရှုခဲ့ပါ၊ စားသုံးသူများနားထောင်ခြင်းအဖြစ် ပို၍ ရှုမြင်ခဲ့သည်။ စားသုံးသူများဟူသောစကားလုံးကိုအသုံးပြုခြင်းကိုကျွန်ုပ်မုန်းပါသည် - ပရိသတ်များပိုမိုနားထောင်ခြင်း။ ဒါတွေကိုပရိသတ်တွေအတွက်လုပ်နေတာပါ။ ဒီဟာတွေကို Nissan လို့ဂရုစိုက်တဲ့သူတွေအတွက်လုပ်နေတာပါ City or Lego ပြိုင်ကား။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တုိ့တုန့်ပြန်မှုများကိုနားထောင်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်ဟုခံစားမိသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့၌အရာတစ်ခုခုကိုစင်ပေါ်တွင်တင်နေသည်၊ ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ပြီးပြီဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်၏ထက်ဝက်သာဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်သည်ထို reception ည့်ခံပွဲကိုကြည့်ရှုရန်၊ နောက်တစ်ခုကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ငါးနှစ်ကအခန်းနှစ်ကြောင်းထဲထည့်ရအောင်ကောင်းတယ် Speed Champions နှင့်အဘို့ပြုကြကုန်အံ့ Lego ကားဘာလဲ Star Wars အဘို့အလုပ်ခဲ့တယ် Lego Space 20 ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနှစ် ၂၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အကွက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကအကောင်းဆုံးဥပမာပဲ။ အကယ်၍ သင်သည် Slave I သို့မဟုတ် Podracer ကိုယူပြီးမူရင်းကိုယခုနှစ် ၂၀ နှစ်မြောက်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်းတို့သည်မိုင်တစ်သန်းခန့်ရှိသည်။art။ ဒီနှစ်ဒီဟာကျွန်တော်အတွက်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ခုပါ။
အခြားရှုထောင့်ရှိပါသလား Speed Champions သင်အလုပ်လုပ်နိုင်မည်လော
အရာရာတိုင်းဟာပြီးပြည့်စုံမှုမရှိဘူးဆိုတာငါသိတယ်၊ ဘီးတွေကသေးငယ်တယ်၊ ငါတို့လုပ်နိုင်တာဒါပဲ။ သင်လက်ရှိကြည့်ရှုပါ Speed Champions နှင့်ဒြပ်စင်ကျနော်တို့ st မဟုတ်ခဲ့ပေart တစ်ခေါက်မှာအသစ်သော element ၂၅ ခုကိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့ကိုကဏ္inများ၌ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဒီနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလိုအပ်တဲ့ဒြပ်စင်တွေဖြစ်တဲ့ကိုယ်ထည်နဲ့ဘီးအခြေအမြစ်၊ windscreens အသစ်တွေကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်။ ဘီးအခြေစိုက်စခန်းရှာဖွေစူးစမ်းနှင့်လက်ရှိထံမှတွေ့ရှိချက်များကိုယူတဲ့အခါ Speed Champions, ဘီးများလှည့်ပေမယ့်သူတို့ကချောချောမွေ့မွေ့မလှည့်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဖြည့်သောဘီးအသစ်တစ်ခုပြုပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကဒီအရာတွေမှာဘီးအသစ်တွေလိုချင်တယ်လို့ပြောရင်မင်းတို့ဘီးအသစ်၊ ဘီးအသစ်တွေ၊ တာယာအသစ်တွေ၊ ဘီးမုတ်အသစ်တွေလိုနေပြီလို့ထင်ရလိမ့်မယ်။ ထိုအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့မတတ်နိုင်သောအရာဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ချဉ်းကပ်နည်းကိုရွေးချယ်ပြီးရွေးချယ်သည်။ ဤကားများသည်နှစ်များတစ်လျှောက် ဆက်၍ တိုးတက်နေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကားတစ်စီးချင်းစီကိုဒေါ်လာ ၁၀၀ ဖြင့်ရောင်းနေကြသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲကဒါကတကယ်ကောင်းတဲ့အချက်ပဲ။ ယခင်ကားများက ၁၄.၉၉ ဒေါ်လာ၊ သင်ကားတစ်စီး၊ အသေးစားဓာတ်ပုံ၊arter အသစ်များမှာဒေါ်လာ ၁၉.၉၉၊ သင်ကား ၂၅% ပိုသောကြောင့် ၂၅% ပိုသောကားကိုသင်ရရှိမည်။ ဒါဟာနည်းနည်းပိုကြာတာပဲ
မင်းဟာပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုမသွားတော့တော့ဘူးartဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကလေးတွေကအဲဒါကိုဂရုမစိုက်တာကိုငါတို့တွေ့ခဲ့တာပေါ့၊ ဒါပေမယ့်မင်းကယာဉ်မောင်းတစ်ယောက်ရတော့မယ်။ ဒရိုင်ဘာကသံခမောက်နဲ့ဆံပင်တုနဲ့ပါလာမှာပေါ့၊ ငါတို့မကြာခဏဆိုသလိုလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ၊ ငါတို့လုပ်တဲ့အခါမှာလူတိုင်းကဘာကြောင့်လူတိုင်းအတွက်ဘာကြောင့်မလုပ်တာလဲလို့အမြဲတမ်းမေးလေ့ရှိတယ်။ ဟုတ်တယ်၊ လူတိုင်းအတွက်ဘာကြောင့်မလုပ်တာလဲ။
ဒီတော့ဒါတွေက ၁၉.၉၉ ဖြစ်မယ်။ ပြီးတော့နှစ်ဆကားတစ်စီးကအခုသူတို့ဈေးနှုန်းအတိုင်းတူညီနေလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ဒီကားနှစ်စီးမှာဒေါ်လာ ၄၀ ဖြစ်မည်၊ ၎င်းသည် Dodge အစုံနှင့်အရင်ကလုပ်ခဲ့သည့် Porsche အစုံနှင့်လိုက်ဖက်သည်၊ ဤနှစ်ကားကားသည်ဒေါ်လာ ၅၀ ဖြစ်မည်၊ Mini set နှင့်ကိုက်ညီမည်။ သူတို့ကနှစ် ဦး စလုံးတစ် ဦး st နှင့်အတူပါလိမ့်မယ်art ကျနော်တို့ဒီ st နှင့်အတူယခုနှစ်ပြုသကဲ့သို့အလင်းအိမ်များအတွက်အချို့သော function ကိုရပါလိမ့်မယ်သောလိုင်းart သေးငယ်သောလိုင်းရှိသော်လည်း၎င်းတွင်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုရှိသေးသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်ခရစ်စမတ်သစ်ပင်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်အနည်းငယ်ကွဲပြားသောအရာဖြစ်မည်။art နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလိုင်း။
ငါအများကြီးအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီ Speed Champions ကားများ, ငါအားလုံးပစ်လွှတ်၏တ ဦး တည်းပေမယ့်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြ, ငါ့ကိုရန်ဤအဘို့အကြီးမားဆုံးသတင်းဖြစ်ပါတယ် Speed Champions ၎င်းကိုစတင်မိတ်ဆက်ချိန် မှစ၍ တုံ့ပြန်မှုသည်ကောင်းလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
နယူး Lego Speed Champions အစုံယခုရရှိနိုင်ပါသည်။
← ကလေးများသည်အခမဲ့ဖြစ်သည် Art ဝက်သက်တမ်းအတွင်းအုတ်၏
တစ်နေ့တာ၏အုတ်ပုံ: RIP Kobe Bryant →